Strong U.S. Jobs Data Support Dollar as Market Looks to U.S.-China Trade Deal | Myanmar Business Today
HomeBusinessInternationalStrong U.S. Jobs Data Support Dollar as Market Looks to U.S.-China Trade...
The dollar held firm December9after data showed surprise strength in the U.S. jobs market, but the currency was restrained from moving higher by worries about an escalation in the U.S.-China trade war.
The dollar index stood almost flat at 97.704 in early Asian trade, after rising 0.3 percent on December 9.
The euro traded at $1.10575, after hittingaone-week low of $1.10395 the previous Friday.
The dollar changed hands at 108.57 yen. It had lifted to 108.92 yen on the U.S. jobs data before losing momentum.
U.S. nonfarm payrolls increased by 266,000 jobs last month, the biggest gain in 10 months, while the unemployment rate ticked back down to 3.5 percent, its lowest level in nearly halfacentury.
Still, investors think that could change if trade tensions escalate further, especially if Trump goes ahead with planned tariffs on some $156 billion worth products from China from December 15.
Top White House economic adviser Larry Kudlow confirmed on December6that the December 15 deadline to impose the new tariffs remains in place, but added that President Donald Trump likes where trade talks with China are going.
China’s exports shrank for the fourth consecutive month in November, underscoring persistent pressures on manufacturers from the Sino-U.S. war.
But growth in imports may beasign that Beijing’s stimulus efforts are helping to stoke demand.
Elsewhere, sterling traded at $1.3135, not far fromaseven-month high of $1.3166 set on Thursday.
Against the euro, the pound traded at 84.17 pence per euro, near its highest level since May 2017.
The Conservative Party extended its lead over the Labour Party to 14 percentage points, up from9percentage pointsaweek ago, an opinion poll by Survation for ITV’s Good Morning Britain showed.
The Canadian dollar traded at C$1.3255 to the U.S. unit. The loonie shed more than 0.5 percent on Friday following data showing the Canadian job market losingasurprise 71,200 net positions in November when economists had expectedagain of 10,000.
အမေရိကန် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်အတွင်း အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု မြင့်မားသည့်အချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာ ပြီးနောက်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အမေရိကန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားက ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ အရှိန်မြင့်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသောကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းမှာ ပိုတိုးလာခြင်းမရှိပေ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ အညွှန်းကိန်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ၀ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့ပြီးနောက်တွင် အာရှတိုက် အစောပိုင်း အရောင်းအဝယ်များတွင် ၉၇ဒသမ၇၀၄ တွင် ဈေးငြိမ်နေခဲ့တယ်။
ယူရိုဈေးကတော့ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် သောကြာနေ့က တစ်ယူရိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၁၀၃၉၅ ဒေါ်လာ အထိ ကျဆင်းသွားပြီးနောက်တွင် တစ်ယူရိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၁၀၅၇၅ ဒေါ်လာရှိလာခဲ့သည်။
ထိုအပြင် ဒေါ်လာနှင့် ဂျပန်ယန်းငွေ‌လဲလှယ်မှုတွင် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဂျပန်ယန်း ၁၀၈ဒသမ၅၇ ယန်းရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယန်းဈေးမြင့်တက်မှု အရှိန်လျော့မသွားမီတွင် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဂျပန်ယန်း ၁၀၈ ဒသမ၈၂ အထိ တက်လာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် nonfarm payroll လစာများမှာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၂၆၆၀၀၀ အတွက် တိုးပေးခဲ့ပြီး ဤသည်မှာ ဆယ်လတာ ကာလအတွင်း အများဆုံး တိုးပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၃ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းနေပြီးအဆိုပါ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရာစုနှစ်ဝက်တစ်ခုအတွင်း အနိမ့်ဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများမှာ အမေရိကန်သမ္မတ Trump အစိုးရ၏ ၁၇ လကြာ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများကို ထိခိုက်စေခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်ခြင်းမရှိသည်ကို ပြနေသည်။
သို့သော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကတော့ အကယ်၍ ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများ ပိုမို ပြင်းထန်လာပါက အထူးသဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတ Trump က တရုတ်ထုတ်ကုန်များအပေါ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၆ ဘီလီယံဖိုး ထပ်မံ ကောက်ခံလိုက်ပါက ထိခိုက်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။
ဈေးကွက်အနေဖြင့်လည်း ဆဲလ်ဖုနး်များ၊ အရုပ်များကဲ့သို့သော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများစွာအပေါ် ကောက်ခံမည့် အဆိုပါ သွင်းကုန် အခွန်များကောက်ခံမည့် အစီအစဥ် ရပ်ဆိုင်းမည်၊ ရွှေ့ဆိုင်းမည်ဟူသော ယူဆချက်များအပေါ် အခြေခံကာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်ဖြူတော် စီးပွားရေး အကြံပေးဖြစ်သူ Larry Kudlow ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သွင်းကုန်အခွန်များ ချမှတ်မည်ဟူသော အစီအမံမှာ မူလအတိုင်းရှိနေကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump အနေဖြင့်လည်း လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆွေးနွေးနေသည့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ၏ အ‌ခြေအနေများကို သဘောကျနေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်စုစုပေါင်းပမာဏမှာ နိုဝင်လာလတွင် စတုတ္ထ‌လမြောက် လျော့ကျသွားခဲ့ပြီး တရုတ်အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲက ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ဖိအားများကျရောက်စေသည်ကို ပြသနေသည်။
Next articleAustralian Shares Slip as New U.S. Tariffs Loom